WhatsApp emelitere na ọ ga-ekwe omume izipu ozi site na iji Siri | Akụkọ akụrụngwa
Naanị ụnyaahụ Apple kwadoro iOS 10, ụdị ọhụrụ nke Cupertino mobile sistemụ arụmọrụ, na WhatsApp jiri ohere wepụta mmelite ya nke ngwanrọ ọhụrụ a na oganihu ohuru na nke di nma. N'etiti ha, ohere nke iji Siri iji zipu ozi ma ọ bụ kpọọ oku site na ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa pụtara.
Ọ bụrụ na ị wụnyela ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ maka iOS, ị nwere ike jụọ Siri ka o dee ozi ma ọ bụ kpọọ mmadụ, na nkasi obi nke a na-egosi. N'ezie, buru n'uche na oge mbụ ị jiri ọrụ ọhụrụ a, a ga-ajụ gị maka ikike.
Naanị gwa Siri na kpochapụwo "Hey Siri", nke ihe anyị chọrọ ime ga-esote, nke ga - abụ "ziga WhatsApp na Rocío" ma ọ bụ kọntaktị ọ bụla ị jikọtara na ngwa ngwa ngwa ngwa. Na-esote, ị ga-ekwupụta ozi ịchọrọ izipu na Siri.
Nke a abụghị naanị ihe ọhụụ nke WhatsApp na-enye anyị na mmelite kachasị ọhụrụ ma anyị nwekwara ike site ugbu a gawa zaa oku olu site na ngwa izi ozi ngwa ngwa site na mkpọchi ihuenyo. Anyị nwekwara ike ịgbakwunye wijetị ga-eme ka anyị hụ, dịka ọmụmaatụ, ozi ọhụrụ anatara.
WhatsApp maka iOS dị ka ọ malitere ịmalite itinye atụmatụ nke ndị ọrụ iPhone niile na-eche ogologo oge, ọ bụ ezie na ọ dị mwute na a ka nwere ụzọ dị anya ị ga-aga na ọtụtụ ọrụ na nhọrọ iji tinye ya n'otu ọkwa ahụ dị ka ngwa ngwa ndị ọzọ ngwa izipu ozi.
Kedu ihe ị chere gbasara akụkọ kachasị ọhụrụ nke WhatsApp maka iOS na-enye anyị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » WhatsApp emelitere na ọ bụ omume ugbu a iji zipu ozi site na iji Siri